Uphononongo lweLongHorn FX ngoJanuwari 2022 Funda isikhokelo sethu esigcweleyo sobunzulu-funda urhwebo olu-2
Uphengululo lweLonghorn FX: Imirhumo yeqonga, ukusasazeka, iiasethi ezinesiko, kunye noMmiselo 2021
Nawuphi na umtyalomali we-forex uyazi ukuba ukuze uthengise imali kwi-intanethi, udinga iqonga lokurhweba ukuze uyenze. Ngokufanelekileyo, le nkampani kufuneka ibenokhetho lweeasethi ezahlukeneyo, inkonzo enkulu yabathengi, kunye neefizi eziphantsi kakhulu.
ILonghorn FX liqonga lokuthengisa kwangaphambili elijolise nakwiiCFD. Lilonke, umrhwebi unexabiso elinomdla lokurhweba ngezixhobo zemali ekunikezelweni. Ezinye zeempahla ezikhoyo apha zimbini zeFX, ii-stock ze-CFD, ii-cryptocurrencies, isinyithi kunye nee-indices.
Isandi esihle? Siza kukuqhuba ngayo yonke into oyaziyo malunga neqonga lokurhweba kwi-Intanethi, ukusuka kuyo yonke le nto iyinkampani nokuba yintoni onokukwazi ukuyithengisa, ukuya kuthi ga phi amandla kunye nemirhumo onokuyilindela.
Njengoko sichukumisile, iLonghorn FX yi-forex kunye ne-CFD broker enikezela ngesixa sezixhobo zemali kuluntu lwezorhwebo. Ungarhweba ngayo yonke into ukusuka kwiibhanki zemali kunye neengqekembe ze-crypto ukuya kwizitokhwe zempahla kunye nezalathiso-zonke ezinokufikeleleka ngeCFD. Ngamafutshane, oku kuthetha ukuba ungathengisa ngokufutshane kwaye uthenge kwakhona ukuba unqwenela.
Ukuxhamla kule ndawo kuyamangalisa i-1: 500 kwaye unokurhweba kwiqonga elidumileyo leMT4. Oku kuneemfumba zezixhobo zokurhweba kunye neetshathi zokusebenzisa. Unokusebenzisa iirobhothi ezizenzekelayo ukuthengisa egameni lakho ukuba unqwenela.
Xa kuziwa kwimirhumo, iikhomishini kweli qonga lomrhwebi lisetelwe kwi $ 6 ireyithi ethe tyaba kwinto nganye othengisayo. Into enomdla kukuba, kwiLonghornFX nantoni na oyifaka iya kuguqulwa ibe yi-Bitcoin kwiakhawunti yakho yorhwebo. Abarhwebi bakwamenyiwe ukuba bahlawule ngeBitcoin ngqo ukuba banqwenela.
Ndingathengisa ngantoni eLonghornFX?
ILonghornFX inezixhobo ezingaphezulu kwe-150 zokurhweba ezinikwayo. Ngaphezulu koku, kukho phantse i-60 FX yezibini ezikhoyo kweli qonga, i-35 yeedigital cryptocurrency, amasheya angama-64, kunye neempahla ezili-11 kunye nezalathiso. Ngaphaya koko, uyakwazi ukwahlula ngokulula ipotifoliyo yakho yezibini zangaphambili kunye nako konke kumrhwebi ofanayo.
Kwisiza uza kubona ukhetho olufanelekileyo lwezibini zangaphambili. Nantsi nje isampulu yento onokuyilindela:
Ii-Majors kubandakanya ukuthanda kwe-EUR / USD, AUD / USD, GBP / USD, USD / CAD, GBP / JPY, NZD / USD kunye ne-USD / CHF.
Izibini zomnqamlezo ezinje nge-EUR / AUD, AUD / JPY, CAD / JPY, AUD / NZD, EUR / GBP, kunye ne-GBP / CHF
Ngapha koko, zininzi iimali ezisakhulayo ezinjengepeso yaseMexico, iLira yaseTurkey, kunye neRandi yoMzantsi Afrika ukubala nje ezimbalwa.
Sithethile malunga ne-forex, ke ngoku siza kuqhuba enye into onokuyithengisa kwiLonghornFX
Ukuba awuthandi ukurhweba nge-forex, ungakhathazeki, kuba kukho iimfumba zeeasethi eziza kuthengiswa kweli qonga.
Izinto zorhwebo ezibonelela ngesinyithi esenziwe ngegolide, isilivere kunye neplatinam. Kukwakho neeoyile, iigesi, kunye namandla. Njengoko ubona, kukho ukhetho oluninzi.
Ukuba unomdla wokukhula okuzinzileyo kunye nomngcipheko ophantsi, kukho phantse ii-indices kweli qonga. Ezinye zaziwa ngcono njenge-FTSE 100, NASDAQ 100, kunye noDow Jones 30.
Ezinye ii-indices kwiLonghornFX zibandakanya; i-Hong Kong 50, i-Nikkei 225 (isalathiso seTokyo Stock Exchange), i-ESP35 (iMadrid Stock Exchange), i-AUS200, kunye nokunye
Ukufikelela kwii-CFD zesitokhwe ezingaphezu kwe-60 ezinje ngeAmerican International Group, Alibaba Group Holding Ltd, Volkswagen AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Procter & Gamble Co, kunye nemfumba engaphezulu.
Ngenxa yokuba ezi zi-stock CFDs, ungathengisa kwaye uthenge izikhundla kwiinkampani ezinjengeCoca-Cola, Amazon, I-American Express, iGoogle Inc, iFacebook, njl.
Kukho phantse i-40 yeedigital cryptocurrency kwiLonghornFX, ke ukuba ufuna ukuzama ukuqikelela ikamva leemali ze-crypto awuyi kufutshane ekukhethweni kweli qonga.
Izibini ze-Fiat-to-crypto zibandakanya i-BTC / USD, BCH / USD, NEO / USD, DASH / USD, ETP / USD kunye ne-OMG / USD
Ke kukho iindidi ngeendidi ze-crypto-cross ezinje nge-BCH / BTC, NEO / BTC, XRP / BIT, ZEC / BTC, QTUM / BIT, SAN / BIT, LTC / BTC, ETP / BIT, XMR / BTC, nokunye
Imirhumo ye-LonghornFX ekulindelwe
I-LonghornFX ithembisa ukusasazeka okumxinwa kunye neekhomishini eziphantsi. Ulwakhiwo lwemirhumo kulula ukuluqonda kwaye lubonakale ekuhleni lwabathengi. Apha ngezantsi singene kwiinkcukacha ezithe kratya malunga nokuba yeyiphi imirhumo onokuyilindela kuleqonga lomthengisi.
Inkqubo-sikhokelo yekhomishini eLonghornFX isemgangathweni ngokuchanekileyo kweli candelo. Kuzo zonke 'izinto' ezithengiswayo, kukho intlawulo eyi- $ 6. Nokuba uthengisa ngemali encinci okanye enkulu intlawulo iyafana.
Oku kuthetha ukuba ngalo lonke ixesha uthenga okanye uthengisa uza kuhlawula i-6 yedola ngeqashiso ekuqaleni xa ungena kwindawo yakho, kunye ne- $ 6 ngeqashiso kwakhona xa ugqibe ukuvala indawo yakho. Oku kukhuphiswano xa ujonga kwimirhumo yokurhweba yabanye abarhwebi abakwi-Intanethi
Ukusasazeka kuxhomekeke kwinto nganye ojolise kuyo kurhwebo. Njengoko besesitshilo, iLonghornFX ibonelela ngokusasazeka okumxinwa kakhulu kwiiasethi ezininzi.
Masikhe singene nzulu ekusasazeni kunikezelo kulo broker.
Kwimeko yeemali, i-NZD / i-USD inokuthengiswa ngokusasazeka kwee-0.7 iipips. Emva koko une-USD / JPY kunye ne-EUR / USD ngosasazeko olunokhuphiswano olukhulu lwee-0.8 iipips.
Kwesinye isiphelo sesikali, kukho izibini ze-fiat-to-crypto ezinje nge-BTC / USD enokusasazeka kweepips ezingama-20.1, DASH / USD 0.34000 pips, BCH / USD 0.71000 pips, kunye ne-ETH / USD kwii-0.83000 iipipi.
Xa kuziwa kwizinto zeliqonga-ukusasazeka kukhuphiswano olukhulu. Ukukunika umzekelo wento onokuyilindela: I-XAU / i-USD (igolide) inokusasazeka kwee-pips eziyi-2.4 kuphela, kwaye i-XAG / USD (isilivere) ikwiipipi ezi-2.6. Unokuthengisa ngeXPT / USD (platinum) kwii-20.1 iipips.
I-US kunye ne-UK i-CFD yeoyile zombini ziza nokusasazeka kwee-0.8 iipips - eli lixabiso elifanelekileyo lisasazeka.
Njengoko besitshilo, lo broker uhambelana ngokupheleleyo neqonga lokuthengisa elaziwa kakhulu MT4 (MetaTrader4). I-MT4 sisixhobo esiluncedo kakhulu kwindawo yokugcina izinto yomntu. Eli qonga leqela lesithathu linika abathengisi ukufikelela kwiimfumba zezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha, iitshathi zamaxabiso kunye nezinye izinto eziluncedo.
Ukukunika umzekelo weziphi izixhobo eziluncedo oza kuzifumana kwi-MT4, jonga kuluhlu esiludibanise:
Izixhobo zobuchwephesha beMT4 ezinje ngePosition Size Calculator, SHI Channel yinyani, i-Profit Tracker, Undock Chart, Orders Indicator, Autofibo, NewsCal, SL & TP values, Breakout zones, Xandra Summary, and lots more
Izikhombisi ezinje ngeMali yokuHamba kweMali, i-Index yoQeqeshiso lweMakethi, iTrendline, iAccelerator Oscillator, iiMvulophu, iFibonacci, iStochastic, iZigZag, Isalathi seVolumu yokuLinganisa (OBV), isiKhombisi sokuHamba kweMali (MFI), i-RSI-kukho ngokwenene iimfumba ezinikezelwayo.
Ukuba ufuna ukubonakaliswa kweempawu emva koko izikhombisi ezinje ngeMoving Average Convergence Divergence (MACD), Ichimoku, iAxponential Moving Average (EMA), kunye neBollinger Bands ziyafumaneka
Iimpawu ezinjengokwazi ukuthengisa ngaphezulu kweakhawunti enye, uluntu lwe-MQL4,
Ngaphezulu kwezi zinto sele sizikhankanyile, i-MT4 ikwenza ukuba usebenzise i-automated Forex robot (ngenye indlela ibizwa ngokuba yi ye-EA EA) ukurhweba kuwe-okuthetha ukuba unokuthenga kwaye uthengise ngelixa urhweba ngokungacacanga.
Kukho uluhlu olubanzi lweentengiso zeodolo onokukhetha kuzo, ke akufuneki ube nengxaki yokufumana enye ukuze ilingane nesicwangciso sakho sokurhweba.
Kukwakhona uMrhwebi weWebhu, usetyenziso (i-iOS okanye i-Android) okanye idesktop- zonke ezikwenza ukuba ufikelele kwiakhawunti yakho yeLonghornFX ukuthenga, ukuthengisa kunye nokufaka naphi na apho ukhoyo, ukuba nje unonxibelelwano lwe-intanethi.
Ukongeza kulungelelwaniso lomthengisi kunye neMT4, iLonghornFX ikwavumela ukuba urhwebe nge-STP (ngqo ngokuSebenza). Oku kuthetha ukuba unokuxhamla kwabanye babanikezeli beenkonzo ezinkulu kwindawo yokuthengisa.
Xa kuziwa ekufakeni imali kwiakhawunti yakho ye-LonghornFX, zimbini iindlela onokukhetha kuzo. Uyakwazi ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho usebenzisa ikhredithi okanye ikhadi lebhanki ukuba unqwenela njalo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, xa ufaka kwiakhawunti yakho- ii-Instacoins (umboneleli wenkokhelo wesithathu) ziyayilawula kwaye ziyiguqulele kwiBitcoin, ke ngoku uthenga i-Bitcoin ngekhadi lakho lekhredithi / ledebhithi.
Unokufaka kwiakhawunti yakho ngokuthenga iBitcoin komnye umrhwebi kwaye ubeke ezo ngqekembe kwisipaji seakhawunti yakho yeLonghornFX.
Ewe kunjalo, ukuba sele unayo i-Bitcoin emva koko unokuqhubeka kwaye uxhase iakhawunti yakho ngokuthe ngqo, usike nasiphi na isidingo somboneleli wangaphandle wentlawulo.
Kule meko, kuya kufuneka
Yenza ikopi yedilesi ye-Bitcoin yesipaji esikrinini- kuba imali yakho iya kuthunyelwa kule dilesi.
Kuya kufuneka uye kwi-wallet yakho yabucala ye-Bitcoin
Cola kwidilesi yesipaji yeBitcoin oyikope kwangaphambili
Faka ixabiso leBitcoin ofuna ukulithumela kwiakhawunti yakho yeLonghornFX
Ngoku uhlawule iakhawunti yakho ngeBitcoin.
Ukuba ufaka imali usebenzisa ikhredithi okanye ikhadi lekhredithi- iLonghornFX ineyona dipozithi encinci ye- $ 50. Ukuba kunjalo, uxhasa iakhawunti yakho ngeBitcoin kwindawo yokuqala, kuya kufuneka ubeke i-10 $ ubuncinci. Kuzo zombini ezi meko, unokurhweba kwinqanaba elincinci ukuba yile nto uziva ukhululekile ngayo.
Kweli qonga, iLonghornFX ithi yenza iinkqubo zokurhoxa kwangolo suku lunye, kwiimeko ezininzi. Amanye amaqonga omthengisi esidibene nawo afuna usuku okanye ezimbini ukuya kwinkqubo yokurhoxa, ke oku kuhle.
Ubuncinci bemali yokurhoxa onokuyicela yi- $ 10, kwaye kwakamsinya nje xa iLonghorn FX isigunyazisile isicelo sakho uya kufumana i-Bitcoin elingana nayo kwisipaji sakho sangasese.
Enye yezona zinto zinomtsalane malunga neLonghornFX linani lesisa lokufumana amandla okwenziwa liqonga.
Ukuba kunokwenzeka ukuba uhlala eYurophu okanye e-UK, uyakukwazi ke oko oko kuthetha ukuba kuncitshiswa kakhulu zii-ESMA zokuphakamisa ii-caps, njenge-1: 20 kwii-exotic kunye ne-1: 2 kwii-cryptocurrensets.
Ngokuchasene noko, xa kufikwa kwiLonghornFX banesisa kakhulu ngokunyusa-ukubonelela nge-1: 500. Oku kuxhomekeke ngokupheleleyo kudidi lweasethi olurhweba ngalo. Sibeke ndawonye uluhlu lwesibonelelo esibonelelwa liqonga.
Iimpawu - 1: 500
I-Forex - 1: 500
Amandla -1: 200
Iimpawu - 1: 200
Izitokhwe - 1:20
Kwimeko ye-1: 500 yokuphakamisa, masithi uneakhawunti ene- $ 200 kuyo. Oku kuthetha ukuba unokurhweba ngokufanelekileyo ukuya kuthi ga kwi-100,000 yeedola. Ngalo lonke ixesha khumbula kwaye uqhubeke ngononophelo xa usebenzisa ubungakanani - njengoko bunokukhokelela ngokukhawuleza ekulahlekelweni kwemali ukuba urhwebo aluhambanga.
Inkxaso yabathengi yenye yezona ndlela zibalulekileyo zokucinga xa ukhetha umrhwebi olungileyo. Sizamile kwaye sazivavanya ngokwethu, kwaye sachukumiseka sisantya apho ilungu leqela lenkxaso yabathengi lalifumaneka ukuphendula imibuzo yethu kwincoko ebukhoma.
Ukuba nenketho yengxoxo ephilayo ihlala ihleli ibhonasi, kwaye ibonakala njengeyona ndlela ikhawulezayo xa isiza ekuthetheni nomntu owaziyo. Ngaphezulu kwengxoxo ekhawulezileyo ebukhoma, abo bangokwesiko okuncinci banokubetha 'isicelo sokufowuna' kwaye ilungu leqela lenkonzo yabathengi liya kukubiza ngokukhawuleza.
Ukuba awufuni kuthetha naye nabani na kwaye umbuzo wakho awungxamisekanga, ungasoloko ubathumela i-imeyile echaza into ofuna uncedo kuyo-iqela liya kubuyela kuwe ngokukhawuleza.
KwiLonghornFX uyakwazi ukwenza iakhawunti yedemo ngeMT4 okanye uMrhwebi weWebhu. Umzekelo wethu, siya kusebenzisa i-MT4.
Kubarhwebi abangekabinayo i-MT4, bafuna nje ukukhuphela isoftware kwaye bayifakele- kulula kakhulu. Khetha ngokulula ifolda kwifayile ekhutshelweyo ukuba ungene kuyo, kwaye phawula 'yenza indlela emfutshane yedesktop' ukuze wazi ukuba ungayifumana phi.
Ucinga ukuba uyikhuphile ifayile, unokuseta iakhawunti yakho yedemo ngokulandela la manyathelo alula:
Izinto zokuqala kuqala, cofa 'ifayile'
Okulandelayo, kuya kufuneka 'uvule iakhawunti'
Gcwalisa igama elipheleleyo, idilesi, inombolo yefowuni, uhlobo lweakhawunti- ilandelwe ngu-'landelayo '
Ngoku, ngokweenketho zeseva, kuya kufuneka ukhethe 'iDemo lexesha elideFX-Idemo' - ilandelwe 'ngokulandelayo'
Okulandelayo, kuya kufuneka ukhethe 'iakhawunti entsha yedemo' - cofa kwindawo elandelayo '
Bhala iinkcukacha eziyimfuneko
Cofa 'Gqiba' kwaye kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yakho yedemo ngokuzenzekelayo.
Ngoku ungaqala ngeakhawunti yakho yasimahla yedemo. Iakhawunti yedemo inokusetyenziswa ngokufuthi kwaye ixesha elide uthanda. Ungabonisa urhwebo nge-BIT, GBP, EUR okanye i-USD ngalo naliphi na inani leemali ozifunayo.
Iidemo zibaluleke kakhulu kubarhwebi abanamava nakubarhwebi abatsha ngokufanayo. Ayisiyiyo kuphela imeko yeemarike zokwenyani ngaphandle kokuchitha idenariyo-kodwa ungazama isandla sakho kwizimvo zesicwangciso esitsha kwaye ungene kwizakhono zakho. Sicinga ukuba urhwebo nge-akhawunti yedemo yasimahla kunokuba yinto efanelekileyo kuphela, njengoko ingengawo onke amaqonga anikezela esi sixhobo kubaxumi bayo.
Kukho iimfumba zamazwe axhaswa leli qonga, kodwa ukuba uhlala kuzo naziphi na iindawo ezingafakwanga, sikugcinele umsebenzi womlenze kwaye sidwelise amazwe angamkelwanga nguLonghornFX:
IRiphabhlikhi yase-Iran ye-Iran
Ungasayina njani ubhalise kwiLonghornFX
Ngoku sidlulile kwezona metric zibalulekileyo zeLonghornFX, unokuba nomdla wokuvuka ubaleke.
Kulula kakhulu kwaye kufuneka uthathe ngaphantsi kwemizuzu eli-10 ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni.
Yiya kwiwebhusayithi yeLonghornFX kwaye ubethe 'sayina'. Kuya kufuneka ufake igama lakho kunye nelokugqibela, idilesi ye-imeyile, kunye negama lokugqitha elikhethekileyo-ekufuneka ubuncinci libe noonobumba abasi-8 ubude.
Iqonga likwenza ukuba ubhalise ngoGoogle okanye u-Facebook- abanye abantu abafumana kulula.
Inyathelo 2: Fundisa iAkhawunti yakho
Okulandelayo, kuya kufuneka ubeke imali kwiakhawunti yakho ukuze ukwazi ukurhweba kwintengiso oyikhethileyo.
Njengoko besesitshilo, kukho idipozithi encinci ye- $ 50 ukuba ubhatala nge-debit okanye ikhadi lekhredithi, kunye ne- $ 10 nje ukuba uxhasa iakhawunti yakho usebenzisa iBitcoin ukusuka kwangoko.
Ngoku ungaqala ukurhweba ngeLonghorn. Kungangumbono olungileyo ukuqala ukusebenzisa iakhawunti yedemo esele siyikhankanyile ngaphambili.
Njengoko sichukumisile, nokuba unamava okanye akunjalo, ukusebenzisa idemo yeyona ndlela yoyikekayo yokuzama iqonga. Ungayichazanga eyokuvavanya okwahlukileyo izicwangciso zorhwebo ngaphandle kokusebenzisa imali oyisebenzele nzima. Iiakhawunti zedemo yeLonghornFX zinokusetyenziswa ngeMT4 kwiWindows, uMrhwebi weWebhu, kunye neMT4 ye-iOS okanye i-Android.
Sicinga ukuba konke konke, eli qonga lokurhweba linokunikezela. Ayisiyiyo kuphela into enokufikelela ekusasazeni okuxineneyo, iitoni zeeasethi kunye neemarike, kodwa iifizi ziyakhuphisana kwi- $ 6 'eninzi'.
Inyaniso yokuba i-LonghornFX isebenza kwiqonga le-MT4 sisibonelelo esikhulu njengoko kukho isixa esikhulu sezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha, iindaba zezemali, iitshathi zamaxabiso kunye neempawu zokuzisebenzisa.
Zonke ezi zinto zibalulekile ekubeni ngumrhwebi ophumeleleyo-oko kukuthi ngaphandle kokuba uthathe isigqibo sokurhweba kwiLonghorn FX ngokusebenzisa irobhothi ezenzekelayo. Kwimeko apho, uhlala phantsi kwaye uvumele ukuba ithengise egameni lakho.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba eli qonga alinayo ilayisensi kwaye ke alilawulwa. Isibonelelo soku, ewe, unokufikelela kumda omkhulu wokuphakama we-1: 500. Ngenxa yemigaqo ye-ESMA, abathengisi abanamaphepha-mvume abavumelekanga ukuba baphinde banikezele ngesi sibonelelo.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci kwiLonghornFX?
Ubuncinci bedipozithi efunekayo ukuqala ukurhweba yi- $ 10 ukuba uxhasa iakhawunti yakho ngeBitcoin, kunye ne- $ 50 ukuba uxhasa iakhawunti yakho ngekhadi letyala okanye ledebhithi.
Ngaba ndingavula iakhawunti engaphezulu kwesinye ngeLonghornFX?
Ewe. Uvumelekile ukuba uvule iiakhawunti ezininzi zokurhweba njengoko ufuna, nganye inemali yesiseko seBitcoin.
Ngaba iLonghornFX ibonelela ngeakhawunti yedemo?
Ewe. Ngapha koko, abathengi banokuvula kwaye basebenzise iiakhawunti ezininzi zedemo njengoko bafuna, kunye nemali yedemo eninzi njengoko uthanda.
Ngaba kuya kufuneka ndithumele ikopi yesazisi sam sefoto kwiLonghornFX?
Hayi, konke okudingayo ligama lakho, idilesi ye-imeyile, ipaswedi eyahlukileyo (ubuncinci beempawu ezi-8) kunye neendlela zokufaka kwiakhawunti yakho.
Ngaba ndingayenza ngenene inzuzo ngokuthengisa ii-cryptocurrensets?
Ewe. Kodwa njengayo nayiphi na indlela yokurhweba okanye yokutyala imali, akukho ziqinisekiso zempumelelo. Eyona nto unokuyenza kukusebenzisa zonke izixhobo ezikhoyo kuwe - amaqonga anje ngeMetaTrader4 abalasele, kunye nokwenza izicwangciso kwiakhawunti yeDemo ye-LonghornFX.